ပြောင်း တရုတ် ယွမ် (CNY) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
တရုတ် ယွမ် (CNY)
ပွောငျး တရုတ် ယွမ် (CNY)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ တရုတ် ယွမ် (CNY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ တရုတ် ယွမ် ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
တရုတ် ယွမ် ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: တရုတ်. တရုတ် ယွမ် ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: kuài, မော်စီတုန်း.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် တရုတ် ယွမ် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း တရုတ် ယွမ် ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
တရုတ် ယွမ်CNY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.15တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ယူရိုEUR€0.127တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.114တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.136တရုတ် ယွမ်CNY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.39တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.943တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.45တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.58တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.197တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.21တရုတ် ယွမ်CNY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.14တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.16တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.837တရုတ် ယွမ်CNY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.02တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.24.26တရုတ် ယွမ်CNY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.203တရုတ် ယွမ်CNY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.224တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.68
တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥15.66တရုတ် ယွမ်CNY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩169.55တရုတ် ယွမ်CNY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦57.06တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.47တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.24
တရုတ် ယွမ်CNY သို့ BitcoinBTC0.00001 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ EthereumETH0.000401 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ LitecoinLTC0.00302 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ DigitalCashDASH0.00212 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ MoneroXMR0.00121 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ NxtNXT16.9 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ Ethereum ClassicETC0.0252 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ DogecoinDOGE54.93 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ZCashZEC0.00217 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ BitsharesBTS7.57 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ DigiByteDGB5.96 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ RippleXRP0.583 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00524 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ PeerCoinPPC0.706 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ CraigsCoinCRAIG69.34 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ BitstakeXBS0.213 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ PayCoinXPY2.66 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ ProsperCoinPRC19.11 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ YbCoinYBC0.00471 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ DarkKushDANK48.8 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ GiveCoinGIVE329.39 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ KoboCoinKOBO26.35 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ DarkTokenDT0.138 တရုတ် ယွမ်CNY သို့ CETUS CoinCETI439.17
1 USD to RMS2020-10-23 03:02:00
260 EUR to REBL2020-10-23 02:53:38
50 SGD to USD2020-10-23 02:53:14
10000 LEMON to USD2020-10-23 02:42:36
104 MG to INR2020-10-23 02:36:54
8990 HKD to MRP2020-10-23 02:34:15
2994 MRP to HKD2020-10-23 02:33:30
1 USD to NGN2020-10-23 02:30:59
3200 HKD to MYR2020-10-23 02:10:56
1200 HKD to USD2020-10-23 01:52:35
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 23 Oct 2020 03:05:04 +0000.